देश र जनताका पक्षको गफ, व्यवहारमा पद, अवशर र पैसाको भोक ! – Mission Khabar
देश र जनताका पक्षको गफ, व्यवहारमा पद, अवशर र पैसाको भोक !
मिसन खबर १६ असार २०७८, बुधबार १८:४७
यतिबेला हामी नेपालीहरु विपद्ध र राजनीतिक अन्योलतामा बाँचिरहेका छौँ । कोरोना कहर केही घट्दैगर्दा झरीसँगै आउनसक्ने पहिरो, बाढी र डुबानको त्रास देशभर बढ्दैछ । कोरोना संक्रमणका अरु लहरहरुको जोखिमको समेत आँकलन गरिदैगर्दा हाम्रा नेताहरु भने पद, अवशर अनि पैसाकै भोका देखिएका छन्, विगतदेखी अहिलेसम्म पनि । नेकपा नाम गरेको एउटा दल अनि त्यो भित्रका पद लोलुप केही नेताहरुको अतृप्त इच्छा अनि त्यही दलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको अहमले यतिबेला सिंगो देशलाई अस्थिर बनाएको छ । बितेको एक वर्ष लामो समय तात्कालिन नेकपाको विवादले देशलाई गाँज्यो ।
कोरोना कहरमा पिल्सिएका नागरिकको चिन्ता नेताहरुले गरेनन् । सरकारले त झनै गर्दैगरेन । पहिलो पटक खोप अभियान सुरु गरेको भन्दै गर्जिने प्रधानमन्त्री ओली अहिले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइन्छ भन्दै भाखा फेरिरहेका छन् । आफ्नो अहम इच्छा पुरा नहुँदा र पार्टीभित्रको अन्तरकलह पचाउन नसकेर एउटै कार्यकालमा दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखी अन्य थुप्रै असंबैधानिक काममा ओलीको अग्रसरता देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका दर्जन हाराहारिका विभिन्न आदेश र फैशलाले ओलीको असंबैधानिक हर्कद सच्याउनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ भन्ने सन्देष दिएपनि । अहिले नै यस्ता कदम रोकिने संकेत देखिएको छैन । आफ्नै पार्टीमा भाडभैलो मच्चाएर देशमा अस्थिरता निम्त्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँगै माधवकुमार नेपालको भुमिका पनि उच्च कोटिकै छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवापनि अझसम्म अवशर र पदका भोका छन् । चाहे देशलाई नेतृत्व दिएर आर्थिक संबृद्धि र विकासका गफ गर्ने ओली हुन वा विपक्षी गठबन्धनका देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, यादव, भट्टराई नै किन नहुन । यी सबै हिजोका टेस्टेड नेताहरु हुन ।
अबको निर्वाचनसम्म पनि प्रबृत्ति नसुध्रिएमा यी नेतालाई सबक सिकाउने मुडमा मतदाता रहेका छन् । एमालेभित्र मैमत्ता बनेका ओली अनि अध्यक्ष ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भनेर पर्खिरहेका नेपालको चाजबाजी पनि आ—आफ्नै छ । अब त अत्ति भयो नेता महोदय, देश र जनताको सेवाको लालिपप बाँढेर आफू र आफन्तलाई तीनपुस्ता पुग्ने सम्पत्ति कुम्लाउने अनि पद र शक्तिमा सधै टासिरहने प्रबृत्तिबाट सच्चिने कि । आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्यान नै नगरेर तुच्छ गालीगलौच रोक्ने कि । देशमा रोगसँगै भोकको चिन्ता रोक्न अनि नागरिकलाई हिजो बाढेका मिठा मिठा सपना पुरा गराउन किन अनि के ले रोक्यो, जनताले जवाफ कुरिरहेका छन् ।